NTFS Usabvisa Chishandiso. Tora Zvadzimwa Mafaira pane NTFS Anotyaira.
DataNumen NTFS Undelete ndiro yakanakisisa chishandiso chekudzoreredza mafaera uye maforodha pa NTFS kutyaira. Iyo inoshandisa matekinoroji epamberi kuongorora uye kutsvaga mafaera akadzimwa uye maforodha, uyezve wozotora ese awo kuti udzore yako most data rakakosha.
Cherechedza: DataNumen NTFS Undelete iri freeware. Unogona kudhawunirodha, kuishandisa uye kuigoverazve zvakasununguka.
4.90 / 5 (kubva 1,651 mavhoti)
Sei DataNumen NTFS Undelete?
Zvinhu Zvikuru mu DataNumen NTFS Undelete v2.0
Tsigiro kune ese mavhezheni e NTFS mafomu.
Tsigiro yekudzosera hova dzakabatana nemafaira akadzimwa.
Tsigiro yekutora dhisiki dhisiki dhayeti zvakakwana uye nekutsvaga mafaera akadzimwa emhando dzinopfuura makumi manomwe dzinozivikanwa, nekushandisa yemukati nyanzvi system ine ruzivo rwakawandisa nezve hunhu uye zvimiro zvemhando yemhando faira.
Tsigiro kudzoreredza akadzimwa maforodha uye iyo yakazara folda hierarchy achidzokorora.
Tsigiro yekusefa uye kurongedza mafaira akadzimwa uye maforodha zvinoenderana nenzira dzakasiyana.
kushandisa DataNumen NTFS Undelete kuti Undelete Mafaira pa NTFS Drives
Iwe wakabvisa zvachose mafaera kana maforodha kubva kune yako NTFS inotyaira nekukanganisa, kana iwe kudurura rako rekudzosera bin usati waona kuti pane chakakosha mairi. Chii chaungaite?
Hapana kunetseka. DataNumen NTFS Undelete inogona kukubatsira. Unogona kushandisa chishandiso chine simba kuti utarise zvinotyaira, tsvaga mafaera abviswa nekukanganisa, udzore uye uwane iyo most data rakakosha kudzokera kwauri.
Start DataNumen NTFS Undelete. Iwe uchaona iyo "Start Wizard "peji, iro rinoburitsa mabasa makuru akaitwa mukusadzora maitiro:
bhatani kuenda kunhanho inotevera.
Cherechedza: Usati wadzosera mafaera akadzimwa pa NTFS anotyaira ne DataNumen NTFS Undelete, zvirinani uvhare chero mamwe maapplication.
Mune peji ino, zvese zvinotyaira pamakomputa ako zvakanyorwa, seinotevera:
Mune iyo rondedzero, unogona kusarudza imwe kana dzakawanda NTFS inotyaira kwaunoda kuongorora uye kudzoreredza mafaera akadzimwa uye maforodha, wobva wadzvanya iyo
Mune peji ino, unogona kuseta sarudzo dzekuita maitiro:
ipapo chengeta iyo
Mune peji ino, madhiraivhu aunosarudza uye nesarudzo iwe yawakaisa yeiyo scan maitiro zvese zvakanyorwa kuti uve nechokwadi:
Kana zvese zvanaka, ndapota tinya iyo
bhatani ku start iyo yekutarisa maitiro.
Mune ino peji, DataNumen NTFS Undelete ichaongorora madhiraivha ako uye kutsvaga mafaera anogona kudzoreka nemaforodha
zvicharatidza kufambira mberi kwescan.
Mushure meiyi scan maitiro, kana paine akabviswa mafaera kana maforodha anogona kuwanikwazve, iwe uchaona meseji bhokisi rakadai.
Dzvanya bhatani "OK", tobva taenda kune rinotevera peji.
Pakati pe peji rino, mafaera ese akadzimwa ayo anowanikwa achiwanikwazve panguva yekutanga scan maitiro akanyorwa. Kana iwe uchigonesa "Skena kumafaira akadzimwa ayo anogona kudzoreka" mune scan sarudzo, ipapo mafaira akadzimwa ayo anogona kudzoreredzwa akanyorwawo.
Mune iyo runyorwa, unogona kusarudza imwe kana akawanda mafaera kana maforodha aunoda kupora, wobva wadzvanya iyo
bhatani kuenda kunhanho inotevera. Unogona kusefa kana kurongedza runyorwa kuti ugone kukurumidza kuwana zvaunoda uye wozoita sarudzo.
Mune ino peji, unogona kusarudza iyo inobuda dhairekodhi yeasina kubviswa mafaira uye maforodha:
Uyezve, unogona kuseta dzimwe sarudzo dzekudzosa pano. Mushure meizvozvo, ndokumbira ubaye iyo
Mune ino peji, mafaera nemaforodha awakasarudza kuti awanezve, pamwe neinoburitsa folda uye nesarudzo iwe yawakagadza yekutora maitiro ese akanyorwa kuti uve nechokwadi.
bhatani ku start maitiro ekudzoreredza.
Mune ino peji, DataNumen NTFS Undelete ichadzorera mafaera nemaforodha aunosarudza kubva kune ako madhiraivhu zvinoenderana nesarudzo dzaunogadzirisa, uye wozviburitsa mufaira rekuburitsa rawatsanangura.
Mushure mekudzoreredza maitiro, kana paine akabviswa mafaera kana maforodha akawanikwazve zvinobudirira, iwe uchaona meseji bhokisi rakadai.
Iye zvino unogona kuvhura dhairekitori rekuburitsa uye nekuwana ese akadzorerwa mafaera uye maforodha.
DataNumen NTFS Undelete 2.0 yakaburitswa munaGunyana 16, 2014
DataNumen NTFS Undelete 1.5 inoburitswa muna Gumiguru 27, 2009
Natsiridza mashandiro eiyi scan maitiro.
DataNumen NTFS Undelete 1.0 yakaburitswa muna Chikunguru 16, 2009
Tora lost uye kudzima mafaera pane ako dhiraivha kana disks.